Anwụrụ ọkụ na-acha anwụrụ ọkụ-eme-ya-onwe gị - Smokehouse - 2019
Ahịa na-enye ọtụtụ ngwaahịa na-ese anwụrụ ọkụ. Ma iji nye ha ezigbo ekpomoko na uto, nke na-egbochi mkpa onye ọ bụla, enwere ike ịṅụ sịga n'ụlọ n'ụlọ oyi ma ọ bụ oyi.
Ngwá ọkụ ọkụ anwụrụ ọkụ ga-adị iche site na ngwaọrụ ụlọ dị otú a site na iji ọkụ na-ekpo ọkụ, naanị site na anya na-ekewa ụlọ nke usoro ịṅụ sịga na-eme site na ọkụ ọkụ na iji ọkụ ọkụ.
Ọ dị mkpa! N'ebe ọ bụla a na-aṅụ anwụrụ ọkụ ọkụ anaghị ekwe.
Ịhọrọ ebe maka smokehouse
Ngwaọrụ na ihe dị mkpa
Jiri nlezianya kụziere ụlọ ọrụ anwụrụ ọkụ ahụ: ntụziaka site n'ọzọ site na ntụziaka
Ime ụlọ na-ese si na gbọmgbọm
Ime ụlọ na-ese anwụrụ na ígwè ígwè
Ime ụlọ na-ese si na brik
Egwuregwu generator (ọkụ)
Ngwaọrụ na ụkpụrụ nke ọrụ ụlọ ọkụ
Ezigbo ụlọ ọkụnakwa nke ọ bụla ọzọ n'etiti ihe ndị dị n'ime ya ga-enwe ihe ọkụkụ, ụlọ dị na oghere e mechiri emechi, nke nwere nko ma ọ bụ okporo maka ịkwado (ngwaahịa) ihe ndị a kwadebere maka nhazi, a na-ebute ngwa maka ịbakọta abụba n'oge usoro ahụ.
Enwere ike ịchọta ebe a na-ese anwụrụ anwụrụ ọkụ dị ka nke a.
Okwesiri ike na stovu ahụ ga-arụ ọrụ nke hearth. N'ọnọdụ a, a ghaghị itinye ụlọ anwụrụ ọkụ n'elu elu nke ikuku chimni.
Ihe kachasị mkpa maka ebe ụlọ smokehouse nọ - nchekwa ọkụ. Ogologo oge ịṅụ sịga ga-esonyere gị site n'ịnwụsi ike na ndị agbata obi n'ógbè ahụ agaghị adị - nke a bara uru ịtụle. Ihe owuwu a ekwesịghị ịbụ nkwenye maka ọdịdị zuru oke nke ọdịdị dị iche iche nke ebe mara mma ma ọ bụ ubi ụlọ.
Ọ dị mkpa! Ọ na-achọsi ike na nso nso nwere mmiri mgbata.
Mkpebi nke ọdịnaya nke ihe onwunwe na teknụzụ nke ga-adị mkpa maka ụlọ nke ụlọ (ụlọ) smokehouse bụ tupu nhọrọ nke usoro ya. Agbanwe usoro a ga - ekwe omume: ụdị usoro a ga - ekpebisi ike site n'inweta ngwá ọrụ na ihe dị adị n'ezie.
N'ọnọdụ ọ bụla, onye nwe ya enweghị ike ịme ihe n'enweghị shọvel, ihe eji eme ihe maka ígwè (ọkacha mma eletriki), ọkpụkpụ, ọkpụkpụ dị arọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ịkwado ọkụ dị gị mkpa. Ọnụnọ mmiri, ájá, simenti, brikstone (stone quarrystone), ígwè na ngwaahịa si na ya (nko, okporo osisi) dị mkpa.
Onye ọ bụla nwere ike ime ụlọ anwụrụ ọkụ na mba ahụ. Nke a esighi ike, ma ugbu a, e nwere ọtụtụ aro na isiokwu a.
Aferem nwere olu nke ihe ruru lita 200 nke nwere oke okpu, nke a kpochara ma sachaa, ga-aka mma. A na-enye usoro ọzọ n'usoro ha.
Site na mgbochi ma ọ bụ ngwá ọrụ ọzọ, anyị na-eme oghere na ala nke gbọmgbọm ahụ.
Anyị na-eme grid (ọ bụghị otu nwere ike) nke a ga-etinye ngwaahịa ahụ maka ịṅụ sịga (nhọrọ bụ iji tinye nkedo ígwè na nko na akụkụ elu nke gbọmgbọm).
Anyị na-eme olulu (enwere ike iji brik ma ọ bụ zabutovat mee ka anyị dịkwuo ike), anyị na-etinye mgbọm na ya, site na olulu anyị na-egwu olulu mita abụọ. Tupu ịwụnye gbọmgbọm ahụ, tinye ya na pan iji chịkọta abụba. Akara nke pan ahụ ga-adị ntakịrị karịa nke gbọmgbọm ahụ, ma ọ bụghị anwụrụ ọkụ agaghị agafe.
Ị ma? Ị nwere ike ịmepụta griiz site na mkpuchi n'elu na gbọmgbọm.
Anyị na-arụ ihe mkpuchi nke mbadamba nkume (slopes) n'elu ọdọ mmiri ahụ, kpuchie ya n'elu ala.
Anyị na-egwu obere oghere, anyị na-akpụ brik na - ọ na-agbanye igbe.
A na-ekpuchi igbe ahụ na-ese anwụrụ site na akwa ákwà na-ejide ya (ọkacha mma na waya ígwè).
Ọ dị mkpa! Igwe anwụrụ ọkụ na-ese anwụrụ ọkụ ekwesịghị inwe mkpuchi.
Ihe nke usoro mmepụta nke a na-eme n'ụzọ dị otú a bụ nke a na-ahụ anya na eserese nke ụlọ anwụrụ ọkụ, nke ụlọ ya bụ nke mgbọm.
O kwere omume ịme ụlọ akwa nke ígwè - mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta obere ụlọ anwụrụ ọkụ si n'otu mkpọmgbọm ahụ, nke aka gị ji aka gị rụọ.
Ya mere, iji ígwè ígwè na-agụnye ịchọta ụdị nke smokehouse maka ntinye ya na mba ahụ. Nye ọtụtụ ndị, akpụkpọ anụ na-enweghị akụkụ dị n'akụkụ ya na welded seams dị mma.
Ọ bụrụ na ụlọ anwụrụ anwụrụ aghọwo akụkụ dị mkpa nke ndụ gị, mgbe ahụ, otu mgbọm ma ọ bụ nanị ụlọ igwe maka ụlọ ọkụ na-ere na mba nwere ike ọ gaghị ezu. Kedu, na nke a, ime ihe ma mee ụlọ aka na-ere n'ụlọ ebe aka gị dị mkpa karị, ga-eme ka ihe owuwu ụlọ - brik.
A na-edebe brickwork na ngwọta nke ájá na ụrọ, a pụkwara ịmepụta ntọala siri ike karị site na mkpuchi nke gbọmgbọm ma ọ bụ site na ihe ọzọ dị mkpa maka ibu dị otú ahụ.
Ị ma? Ụkpụrụ nke ngwá ọrụ nke ụlọ anwụrụ ọkụ bụ ụkpụrụ mgbe ị na-eji ihe ọ bụla.
Chimney nkeji kpebiri site n'isi: iru-ya di kwa ka obosara-ya di, obosara-ya di kwa n'obosara-ya. Anwụrụ ọkụ ekwesịghị ịdaba n'elu. Ya mere, a gha-eji nlezianya a na-egwuru egwu kpoo nchara gwuru. N'elu ihe owuwu dị n'okpuru nke kpuchiri ụwa.
Ụlọ ọkụ ọkụ (center) na-arụ ọrụ n'ozuzu nke ọrụ ndị na-ese anwụrụ anaghị ewere usoro ịzụ ahịa pụrụ iche na ngwaọrụ ahụ. Otú ọ dị, ndị omenkà nke ndị mmadụ apụghị ichere, dị ka a na-achị, na-enweta nsonaazụ nke mgbalị ha karịa ngwa ọdịnala.
N'ịle ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkụ ọkụ, nke a nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa ahụ, ndị na-emepụta ụlọ na-emepụta ọtụtụ ngwaọrụ ha maka ịmepụta nnukwu anwụrụ ọkụ, na-esote ya na ụlọ na-ese anwụrụ ọkụ.
Ịmepụta generator na aka aka ya, onye nwe ụlọ nwere ike ịbịa site n'ihe ndị ahụ na akụkụ ndị ahụ ọ dị nso. Ihe mgbochi ma ọ bụ pan ga-adabara n'ụzọ zuru oke maka ahụ, ihe ọ bụla na-eguzogide ọgwụ dị mma maka anwụrụ ọkụ.
A na-eme ka uto nke ngwaahịa na-ese siga site na ihe eji eme ihe. A na-akpọ ndị na-ese siga iche iche na e nwere conifers.
Ebube, shavings ma ọ bụ ibe kwesịrị site na juniper, oak, maple, cherry, apple or sea buckthorn. Mgbe a na-agwọta ogbugbo, nnụnụ nnụnụ, birch na alder nwere ike iji.
Maka igwe anwụrụ ọkụ, ọ bụghị naanị na ntụkwasị obi nke ngwá ọrụ ahụ dị mkpa, kamakwa ndidi nke ndị na - eji ya - usoro nke na - eme 30-35 degrees Celsius, nke na - adịkarị ruo ụbọchị 5-7, nwere ike igbu oge. Mgbochi nwere ike ịghọ nsị nri..
Iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ na usoro dum nke usoro ahụ ga-enyere aka abụghị ihe a chọrọ n'aka nke valvụ nke dị n'akụkụ elu nke hearth. Ejiri igwe na-ekpuchi ihe mkpuchi akpa dị ka akpa dị ka mmiri ga-esi wetuo ya site n'oge ruo n'oge na mmiri.
Ezigbo amamihe nwere ihe atụ nke ịmepụta ụlọ ebe anwụrụ ọkụ si na bọket (ọ bụghị ntakịrị gbọmgbọm?), Site na onye na-esi nri na-esighị ike, ọbụna site na friji ochie. Ụfọdụ ndị isi na-emepụta ngwá ọrụ electrostatic iji mee ka usoro ịṅụ sịga na-ese oyi.
N'agbanyeghị usoro a họọrọ, ma dị mfe ma dị mgbagwoju anya, ịnwa iji aka gị mee ụlọ na-ese siga na-aṅụ sịga ga-enwe ọganihu ma na nkà na ụzụ na usoro nsị.
Otu esi emeso beps n'elu nkpuru-vine
Mkpụrụ vaịn: ihe vitamin dị, ihe dị mma, ọ ga-ekwe omume iri nri n'abalị
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu esi eme ka igwe na-ekpo ọkụ na-ese siga na-emepụta ihe